Ardayda ka soo Zambia - Study in Ukraine. Xarunta Admission Yukreeniyaan
Ardayda ka soo Zambia
Ardayda ka Zambia leeyihiin si ay u helaan fiisooyinka ay ka safaaradda Ukraine ee South Africa. Ardaydu waxay dalban karaan online ama la xiriir kartaa wakiilka maxaliga ah ee Namibia dhigista iyo habka fiisada.
P.S.: Ardayda of Zambia wajihi badan oo dhibaatooyin ah ee helitaanka fiisooyinka la sababta aan go'aansaday in ay diyaarin adeegyada fiisaha keliya ee ardayda. Haddaba ardayda ayaan wajihi doono wax dhibaato ah iyo si fudud u heli doono fiisooyinka ay.